Mirrors Nepal » चेल्सीले मेस्सीलाई रुवाएको त्यो रात, त्यो हप्ता !
चेल्सीले मेस्सीलाई रुवाएको त्यो रात, त्यो हप्ता !
२९ फाल्गुन २०७४, मंगलवार १७:०१
युरोपियन च्याम्पियन्स लिगमा बिहीबार अन्तिम १६ मा दुई ‘हेभिवेट’ टिम भिड्दैछन् । धेरैलै प्रतीक्षा गरिरहेको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा स्पेनिस बार्सिलोना र इंग्लिस क्लब चेल्सी आमनेसामने हुँदा खेल निकै रामोञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
बार्सिलोनाको घरमा हुने यसै खेलबाट बार्सिलोना जित हात पार्दै अन्तिम आठमा पुग्न चाहन्छ । यता, चेल्सी यो सिजन उच्च फर्ममा रहेको बार्सिलोनाको लय भंग गर्दै उसकै घरमा हराएर अगाडि बढ्न चाहन्छ ।
अहिले भोलिको खेललाई लिएर अनेक टिकाटिप्प्णी तथा अड्कलबाजी हुँदै गरे पनि यो खेलको नतिजा यसै भन्न सकिँदैन । कारण, दुवै बलिया टिम छन् । र, अघिल्लो लेगको नतिजा बराबरी छ ।
त्यत्ति मात्रै हैन, यी दई टिमको इतिहास पनि कोहीभन्दा कसैको कमजोर छैन । विगतमा विभिन्न प्रतियोगित गरी कूल १५ पटक भिड्दा पाँचपटक बार्सिलोनलो जितेको छ भने चेल्सीले पनि पाँचपटक नै जितेको छ । बाँकी पाँच खेल बराबरीमा सकिएका छन् ।
यस्तो अवस्थाबीच भोलि क्याम्प नोउमा हुने खेलमाथि धेरैको आँखा परेको छ । अहिलेसम्म मात्रै एकपटक च्याम्पियन्स लिगको उपाधि जितेको चेल्सीले पाँचपटक च्याम्पियन्स लिग जितेको बार्सिलोनालाई उसकै घरमा कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ ।
त्यो रात, जुन रात चेल्सीले मेस्सीलाई रुवाएको थियो
जब बार्सिलोना र चेल्सी एकअर्काविरुद्ध उत्रिन्छन्, यी दुई टिमको सन् २०१२ को खेलको प्रसंग आउँछ । जतिबेला चेल्सीले बार्सिलोनालाई उसकै घरमा स्तब्ध बनाएको थियो ।
सन् २०१२ मा च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम चारमा बार्सिलोना र चेल्सीको टाइ भएको थियो । त्यत्तिबेला बार्सिलोना पेप ग्वार्डिओलाको नेतृत्वा थियो । उनको नेतृत्वमा निकै सफल र बलियो देखिएको बार्सिलोना त्यसबेला भने स्तब्ध भयो ।
जहाँ अन्तिम चारको पहिलो लेगको खेलमा चेल्सीसँग १–० ले स्तब्ध भयो । तर, दोस्रो लेग आफूहरूको घरमा हुने भएकाले बार्सिलोनाका खेलाडी र कोच पेप घरमा जितेर अगाडि बढ्नेमा ढुक्क थिए ।
जब खेल सुरु भयो, सर्जियो बुस्केट्सको गोलबाट बार्सिलोनाले अग्रता लियो । त्यसपछि अहिले म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट खेलिरहेका एलेक्सिस सान्चेजलाई गम्भीर फाउल गरेपछि बार्सिलोनाले पेनाल्टी पायो । जहाँ चेल्सीका जोन टेरी रातो कार्ड खाँदै मैदानबाट बारिए ।
त्यसबेला बार्सिलोनाका लागि पेनाल्टी आन्द्रे इनिएस्टाले हानेका थिए । उक्त पेनाल्टीमा उनले गोल गर्दै खेल २–० बनाए । यो गोलपछि बार्सिलोना एग्रीगेटमा पनि अगाडि रह्यो । र, जिततर्फ अघि बढ्यो ।
तर, खेलमा एकाएक अवस्था उल्टियो । १० खेलाडीमा सीमित चेल्सीले शानदार पुनरागमन गर्यो । रामिरेजले गोल गर्दै चेल्सीलाई खेलमा फर्काए, जुन चेल्सीका लागि अवे गोलसमेत थियो ।
रामोञ्चक उक्त खेलमा दोस्रो हाफ सुरु भएको तेस्रो मिनेटमै बार्सिलोनाका चेक फाब्रिगासलाई चेल्सीका खेलाडीले लडाएपछि बार्सिलोनाले पेनाल्टी पायो । तर, उक्त पेनाल्टी हान्न पुनः इनिएस्टा आएनन्, मेस्सी अघि सरे ।
जब मेस्सीले कठिन मोडमा पेनाल्टी हाने, बल चेल्सीको पोस्टको बारमा लाग्दै बाहिरियो । र, मेस्सीले आफ्नो घरमा चेल्सीलाई जीवनदान दिए । त्यसपछि खेलको अन्तिमतिर चेल्सीका फर्नान्डो टोरेसले गोल गरे । र, खेल २–२ को बराबरी बनाए ।
तब पहिलो लेग १–० ले जितकाले चेल्सीले एग्रीगेटमा खेल ३–२ ले जित्दै बार्सिलोनालाई स्तबध बनायो । र, आफू फाइनलमा पुग्यो ।
बार्सिलोनाका लागि बिर्सनलायक त्यो दिन हप्ता
अन्तिम चारमा चेल्सीसँग स्तब्ध भएको तीन दिनपछि नै बार्सिलोनाले ला लिगामा चीर प्रतिद्वन्द्वी रियल मड्रिडसँग खेल्नुपर्ने तालिका थियो । जहाँ रियलले बार्सिालेनालाई २–१ ले स्तब्ध बनायो ।
एकै सातामा भएका दुई ठूला खेलमा पराजित भएको त्यो साता बार्सिलोनाका खेलाडीले सायदै सम्झिन्छन् होला ।
फेरि चेल्सीसँग हेड टु हेड
त्यसबेला चेल्सीसँग च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम चारमा नमिठो हार व्यहोरेको बार्सिलोना भोलि पुनः क्याम्प नोउमा चेल्सीसँगै खेल्दैछ । यसअघि भएको पहिलो लेगको खेलमा बार्सिलोनासँग १–१ को बराबरीसँगै अवे गोलको फाइदा छ ।
तसर्थ, भोलिको खेलमा बार्सिलोनाले चेल्सीलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सकेको खण्डमा पनि उसले अवे गोलका आधारमा जित्नेछ । तर, यदि चेल्सीले बार्सिलोनाको घरमा १ गोल मात्रै हन्यो भने तब बार्सिालेनाले चेल्सीलाई गोलअन्तरमै हराउनुपर्ने हुन्छ ।
भोलिको खेलमा बार्सिलोनाले पहिलो रोजाइका खेलाडी उतार्दैछ । त्यसबेला पेपको नेतृत्वमा रहेको बार्सिलोनाको नेतृत्व यतिबेला अर्नेस्टो भाल्भर्डेको हातमा छ । र, उनी यो सिजन उच्च लयमा छन् । उनको नेतृत्वमा बार्सिलोनाले यो सिजन मात्रै एक खेल हारेको छ ।
यता, चेल्सी पनि भोलि बार्सिलोनाविरुद्ध उत्रिँदा ६ वर्षअघिको इतिहास दोहोर्याउने दाउ बोकेर क्याम्प नोउमा उत्रिनेछ । बार्सिालेनाका पहिलो रोजाइका स्टार खेलाडी मैदान उत्रिँदा भोलि चेल्सीका कोच कोन्टेले युवा खेलाडीलाई हतियार बनाउनेछन् ।